Wanhao Duplicator 3 7D Printer Review | Akụrụngwa n'efu
Anyị nyochaa ngwa nbipute Ihe ngosi 3D Wanhao 7, a equipo nke echiche SLA jiri resin mee ihe iji chepụta atụmatụ anyị na mkpebi dị oke.
onye bụ onye Asia na-emepụta nke ọma na Onye kere obodo maka ụdị ngwaahịa dị iche iche ọ nwere na katalọgụ ya yana ogo / ọnụahịa dị mma na ha niile. Ruo ugbu a ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya naanị n'ịmepụta ngwaahịa dabere na mbipụta FDM, na igba egbe a ha emeela ka ahịa maa jijiji site na iweta ngwa nbipute ejiri ọnụ ahịa dị ala karịa ndị ọzọ na-asọmpi ha
Ebe ọ bụ na ibipụta iji stereolithography bụ usoro dị iche na mbipụta FDM nke anyị na-ekwukarị banyere ya na blọọgụ, anyị ga-akọwa ntakịrị banyere ụdị dị iche iche kachasị na teknụzụ a nke anyị nwere ike ịchọta na ndị na-ebi akwụkwọ 3D na-ere ahịa ugbu a.
1 DLP vs SLA vs mbipụta MSLA
1.1 DLP mbipụta
1.2 SLA obibi
2 Tụnyere nke yiri ngwaahịa
3 Ihe nbipute ihe na ihe omuma
4 Kwalite n'etiti nsụgharị
5 Unbox na mmalite mmalite nke ngwa nbipute Wanhao Duplicator 3 7D
6 Ihe pụrụ iche nke mbipụta SLA
6.1 Ọgwụgwọ Ọgwụ Post
7 Mgbe-sales ọrụ na nkwado site na Onye kere obodo
8 Njikọta, ọrụ kwụ ọtọ na sistemụ arụmọrụ na-akwado
9 Ọnụahịa na nkesa
11 Uche ederede
12 Uru na ọghọm
12.3 Isi iyi
DLP vs SLA vs mbipụta MSLA
A na-eji ihe ngosi dijitalụ eme ka onyinyo ahụ kwekọọ na otu oyi akwa. Ozugbo emechara, a oyi akwa na-ebe obibi na ndị na-esonụ n'ígwé na-synthesized otu otu agbasoro ọ bụla ọzọ. N'ihi na ihe oyiyi nke oyi akwa ọ bụla gosipụtara dijitalụ, nwere ọtụtụ pikselụ square, na-akpata oyi akwa mejupụtara obere brik akụkụ anọ ndị a na-akpọ voxels na-agbakọta n'akụkụ axis Z.
A na-eji laser UV ese ihe ọ bụla nke ihe ahụ na enyo enyo abụọ, nke a maara dị ka galvanometers (otu na X axis na otu na Y axis), na-eji ngwa ngwa tụọ laser gafee mpaghara a na-ebipụta, na-eme ka resin ahụ dị ike ka ọ na-agagharị. Mgbe emechara oyi akwa, a na-enyocha ya ma na-emeghachi usoro ahụ maka ọkwa niile na ihe ahụ. Ekwesịrị imebi imewe ahụ, oyi akwa site na oyi akwa, n'ime usoro nke akara na ahịrị. The laser, iji galvanometers, na-achọpụta usoro nhazi a na resin.
A na-eji matrik LED mee ihe dị ka isi ọkụ ya na njikọ LCD photomask iji mee ka onyinyo ọkụ nke matriks LED. Dị ka DLP, LCD photomask egosiputa digitally ma mejupụtara square pikselụ. Ogo nke pikselụ dịgasị dabere na etu esi arụpụta LCD photomask na pikselụ ọ bụla agbanyụrụ na ihuenyo LCD iji mee ka ọkụ ọkụ gafere iji mepụta oyi akwa ahụ. A na-ahazi pikselụ nke LCD photomask dabere n'otú esi emepụta eriri ọkụ.
Enwere ike ịchọpụta ya Ọgwụgwụ nke ndị na-ebi akwụkwọ ego SLA na-akwụghị ụgwọ dị nsoNa ibe ahia nke Asia dika Aliexpress anyi nwere ike ichota ndi oru SLA ndi ozo di iche iche. Maka ntụle a, anyị ahọrọla usoro nyocha, ụzọ dị iche iche sitere na ndị nrụpụta kachasị na mpaghara ahụ na mkpọsa kickstarter nke anyị na-achọ nnukwu ihe ịga nke ọma n'ihi na anyị nwere olile anya na ọ ga-edozi akara maka ndị ọzọ na-emepụta na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ihe nbipute ihe na ihe omuma
Wanhao Duplicator 3 DLP 7D ngwa nbipute bụ ngwaọrụ nwere oke nwere nke anyị nwere ike idowe n'ebe ọ bụla n'ụlọ anyị ma ọ bụ n'ọfịs. Mbọ na akụkụ nke sonso 200X200X430 mm anyị nwere warara na ogologo otu na-enweghị a peso gabiga ókè, 12 N'arọ.
Na ngwa nbipute nwere 120x70x200mm olu mbipụta na a 35 micron oyi akwa mkpebi. Site na njirimara ndị a, ndị otu a na-elekwasị anya n'ike bipụta nkenke ihe eji emepụta ihe na nkọwapụta na-enweghị ngwụcha. Jewelers, ndị dọkịta ezé, ndị agha wargame, ndị na-ese ihe na ndị na-ese 3D ga-ahụ ibe na-enweghị ike ịkọwa na otu a.
Na a ọsọ 30mm / h (oke nke ga-adabere na njirimara ọgwụgwọ nke resin ejiri) Akụrụngwa Wanhao pụtara dị ka otu n'ime ngwa ngwa kachasị na ntụnyere. N'iburu nke a n'uche, ibipụta ihe nke 20 cm nwere ike were 10 awa.
Na ngwa nbipute na-eji ugologo 395-405 nm ọ dakọtara na ọtụtụ resins dị na ahịa. Inwe gbanwee naanị usoro ọgwụgwọ iji nwee ike ịgbanwe site n'otu ihe gaa na nke ọzọ.
Na ngwa nbipute nwere nnọọ ihe siri ike ewu, ihe niile e ji opaque nwa metal.
Onyinye ike bu ihe ozo.
Anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe ndị mejupụtara ya dị ka ndị a:
Kpuchie: ọ bụ ihe mbughari nke na-ahụ maka ikpuchi onye nbipute anyị ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ gaghị emebi anya anyị na ikpughe ọkụ UV. Ọzọkwa na-echebe resin anyị site na isi mmalite UV nke ahụ nwere ike imebi echiche anyị. Ọ bụ ihe mmewere jiri ọla, sie ike ma sie ike. O nweghi nkpu ka o nwe ike imeghari ya karia Ọ ga-achọsi ike ka ọ bụrụ nke transperent ka e wee nwee ike ịhụ resin tray mgbe a na-eme echiche ahụ.
Uzo di ala: ọ na-etinye ihe ndị ọzọ dị na ya ma bụrụ isi ihe obibi anyị. N'ihu anyị na-ahụ akara ngosi nke onye nrụpụta na bọtịnụ ike. N'ime ya ka enwere ụlọ elektrọnik niile dị mkpa iji mee ka setịpụrụ rụọ ọrụ. Anyị enyochaala imewe bụ adighi ike na okwu nke airflows iji mee ka igwe eletrik dị jụụ. Nkọwapụta a nwere ike ịkpata nsogbu na akụrụngwa dị na mbipụta nke chọrọ ọtụtụ awa.
Z axis ogwe aka: bụ mmewere na-elekọta wuo mbughari efere iji mee ka ọ pụọ na ọgwụgwọ ahụ dịka e kere eke. Ọ mejupụtara a nkenke threaded mkpanaka nke na-ebute usoro nke stepper moto. Njikọ dị n'etiti mkpara na moto ahụ siri ike na mgbe ụfọdụ enwere ike ịhụ njehie mbipụta n'ihi nsonaazụ.
Bipute isi: Mbughari ikpo okwu nke mbipụta anyị ga-arapara ma na-agagharị na axis Z
Z axis kwụsị: Optical sensor bụ maka ịkwụsị akwa ebipụta mgbe ị nọ na ihuenyo LCD
Wanhao Duplicator 7 kwadebere n'ụzọ nke a HD LCD ihuenyo inye mkpebi nke 2560 x 1440 pikselụ. A na-etinye tray nwere ala transperent na ya, na-ekwe ka ọkụ UV si na LCD mee ka resin ahụ sie ike. Ala nke tray (nke a na-akpọ FLEXBAT dịka ọ bụ mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na nke na-agbanwe agbanwe) bụ mmewere nke na-ata ahụhụ n'ihi mmeghachi omume kemịkal na ọgwụgwọ nke resin, enwere ike dochie ya mgbe ọ dara oke njọ.
Kwalite n'etiti nsụgharị
Wanhao Duplicator 3 7D ngwa nbipute bụ ndị na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Onye nrụpụta ahụ na-etinye uche na nkwupụta nke ndị ahịa ya ma meela ọtụtụ mgbanwe iji dozie nsogbu niile akọwara ha. Kpọmkwem na ụdị kachasị dị ugbu a enwere ike idozi adịghị ike niile anyị kpọtụrụ aha na mbụ. Omume a na-eme ka Wanhao tinyekwuo uru na anyị masịrị ya.
Anyị na-enye gị obere nchịkọta nke version 1.4 ndozi ngwa nbipute:
Mountrịbawanye na njikọ nke UV LED ka mma iji zere nsogbu eletriki
Igodo ike bugara n'azụ onye nbipute.
Brass nut na mkpanaka Z maka usoro ziri ezi. E meziwo usoro clamping iji chebe mkpanaka ma nye ya ndọta ka mma.
UV jụrụ ofufe (60mm) na heatsink nha mụbara maka mma jụrụ. Agbakwunyere ọtụtụ oghere na azụ nke ngwa nbipute maka ikuku ikuku ka mma. Ejiri 60mm n'akụkụ nke abụọ iji hụ na motherboard dị jụụ na ikuku ahụ.
Ihe ọhụrụ a na-akpụzi nwere echiche ka mma.
Ọhụrụ ike 70W ike ọkọnọ.
Ugbu a, a na-arụzi ụlọ ọrụ ihe owuwu iji kwado + 0,03mm.
Unbox na mmalite mmalite nke ngwa nbipute Wanhao Duplicator 3 7D
N'iburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke kilomita ndị nbipute gafere iji ruo n'aka anyị ( e sila China bute ngwa ọrụ), abịawo n'ọnọdụ karịrị nke a na-anakwere. Enweghị mmebi pụtara na nkwakọ ngwaahịa ahụ. Na vidiyo dị n'okpuru ị nwere ike ịhụ nkọwa.
Agbanyeghị, mgbe anyị na-achọ ịgbanye akụrụngwa anyị achọpụtala na bọtịnụ ike adịghị arụ ọrụ, mgbe anyị lechara ọgbakọ ndị a kacha eji eme ihe, anyị achọpụtala na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na eriri USB na-atọpụ n'oge mbupu (n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na emeputa na-ejide ha n'ọnọdụ iji silicone) na ọ na-ọbụna na-atụ aro na tupu mbụ mgbanye ala nke electronic na niile njikọ na-enyocha. Edozi nsogbu, e nwere eriri dị iche iche.
Onye nbipute abụghị nke naanị ya ma choro PC ma ọ bụ ihe ndị yiri ya jikọtara ya na USB na HDMI USB. Na akwụkwọ a jikọtara njikọ iji budata ngwanrọ site na igbe na-akwụghị ụgwọ. Akwụkwọ ntuziaka gụnyere nseta ihuenyo nke otu esi ahazi ngwanrọ obibi na windo. Nsogbu nke abuo, na a attentiona nti na akwukwo ndi anyi na-enwetabaghi. Mgbe ozi ịntanetị ole na ole na ọrụ ọrụ ndị nrụpụta, anyị nwetara akara ziri ezi iji mee ka anyị nwee echiche mbụ..
Ihu na nsogbu agụ na kpo oku nke ụdị mbụ nke onye nbipute na ndị otu anyị bụ otu "emetụta", anyị kpebiri ịhapụ ogige nke elektrọnik dị na ya iji melite ventilashị ma jikọọ HDMI anyị ozugbo na sekit karịa iji obere ndọtị gụnyere. Isi okwu a na-eche ngwọta doro anya.
N'ọnọdụ anyị ndị na-ebi akwụkwọ isi ruru anyị n'ụzọ zuru oke na anyị nwere ime mgbanwe ọ bụla na ya n'oge ule. Ozugbo ntọala dị na ọnọdụ 0 nke axis Z, ọ ghaghị imetụ mpempe akwụkwọ flexibat ahụ kpamkpam, ma ọ bụghị na anyị nwere kposara 4 nke anyị nwere ike ịhazigharị iji dozie ya.
Otu n'ime nkọwa kacha adọrọ mmasị anyị n'oge mbipụta bụ nke ahụ na ngwa nbipute dị jụụ, anyị anaghị anụkarị mkpọtụ nke naanị moto na-agụnye ugwu ahụ. Kedu ihe dị iche ma e jiri ya tụnyere ndị na-ebi FDM !!
Ozugbo anyị hụrụ ihe mbụ edere, anyị na-echefu ihe niile mere anyị ji ata ahụhụ, mbipụta mbipụta dị iche ma dị elu karịa ihe enwere ike ịnweta site na ngwa nbipute FDM. Mgbe iri na abụọ na-ebi akwụkwọ anyị nyochaa na a na-eji mkpụrụ resin dị elu na obere ihe eji ebi akwụkwọ ọ bụla.
Ihe pụrụ iche nke mbipụta SLA
Mmetụta na resin o nwere particularity na eme si n’elu rue ala Ya mere, isi okwu ọ bụla nke ihe ebipụtara ka etinyere ya n'ụzọ ụfọdụ ka ọ bụrụ ebe a na-ebi akwụkwọ ka ọ ghara ịdada na ala nke tray n'okpuru ike ndọda. Nkọwa a sụgharịrị n'ime a na-etinye usoro mgbasa ozi na atụmatụ ndị a ga-ebipụta n'ụzọ ụfọdụ.
Iji mmiri mee ihe n'ichepụta ọ bụla na-agbakwunye ihe isi ike mgbe niile. N'ọnọdụ anyị, mmiri mmiri a na-ekwu maka ya bụ ihe mmetụta dị na ya yana ọ dị na cuvette nwere ikike nwere oke. Nke a pụtara na ọnụọgụ ole na ole ọhụụ na dabere na etu esi ebipụta akwụkwọ anyị ga-ejupụta resin ọzọ. Ka e were bipụta mbipụta anyị nke ọma ga-enwe mgbe nile na tree ọzọ olu nke resin karịa ibu na-ebipụta.
Ebe ọ bụ na ihuenyo LCD chọrọ otu oge ahụ na mbọ iji gbaa ọkụ karịa yana nke ọma, anyị nwere ike ibipụta ọtụtụ ihe dị ka anyị nwere ike ịdaba na mpaghara obibi akwụkwọ na-enweghị emetụta oge achọrọ ma ọ bụ ogo enwetara.
Ọgwụgwọ Ọgwụ Post
Ihe ebipụtara na resin adịghị njikere maka ojiji. Ebiputara ohuru ha nwere mgbanwe na adighi nma ha na-ekpuchikwa resin kpamkpam na mmiri mmiri. Anyị ga-eme ọgwụgwọ na iberibe ahụ ịhapụ ha na steeti achọrọ. Ekwesiri itinye akụkụ ahụ maka oge 10 na mmanya na ihe ejiri tinye ha ga-ekpughere anyanwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na UV. Site na ọgwụgwọ a, anyị ga-enweta iberibe ihe eji arụ ọrụ ka mma ma dị ọcha. Fọdụ ndị nrụpụta dịka FormLabs amalitela ịmepụta ngwaahịa azụmahịa akọwapụtara iji mepụta ọgwụgwọ ndị a post-print. N’ụlọ anyị nwere ike iji ihe ọ bụla ikuku ikuku jupụtara na mmanya (site na ụlọ ahịa ọgwụ) ma ọ bụrụ na anyị akọwara nke ọma anyị nwere ike iji ọkụ ọkụ ọkụ UV nke enwere ike ịzụta na ọnụ ala dị ala na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Mgbe-sales ọrụ na nkwado site na Onye kere obodo
El Ọrụ ndị na-ere ahịa mgbe emechara nke ọma na-edozi ma mezie obi abụọ anyị niile jiri ndidi ziga akwụkwọ site na mail. Otú ọ dị, ọ bụghị na-ahụghị nke ahụ ebe dị anya site na ire ya bụ nnukwu nkwarụ na-eme ka nkwado ọrụaka sie ike. Iweghachi akụrụngwa anyị n'aka onye nrụpụta maka nrụzi dị mfe ghọrọ ọrụ na-agaghị ekwe omume n'ihi nnukwu ụgwọ mbupu. Enweghịkwa akụkụ ọ bụla maka akụrụngwa maka ire ere na weebụsaịtị nke onye nrụpụta, agbanyeghị mgbagwoju anya nke ihe eji eme ihe na-enye anyị ohere inweta ihe ọ bụla anyị chọrọ.
Maka ihe a niile inweta igwe na onodu ndi a choro ka aka Gi Mee N'onwe Gị nke mere na anyị onwe anyị na-elekọta idozi nsogbu ndị na-ebilite. Site na ile anya na onu ha ka ha na ijikota eriri nile ka hazie ihe ndi di nkpa maka ikuku ikuku ziri ezi maka ime ka igwe eletrọniki di nma. Ọ dabara nke ọma na anyị bụ ndị nrụpụta na nke a maka anyị bụ ihe ịma aka karịa nsogbu.
Ihe akaebe na nke a bụ echiche zuru ezu nke Onye kere obodo nwere ike ịchọta na ịdị adị nke a Otu onye ọrụ Facebook nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị òtù 2000 nke ha na-edozi nsogbu ibe ha ma na-atụ aro mmezi. Ọbụna ndị emeputa nwere a ọnụnọ na otu na akụkụ nke ndị chọrọ ndozi e webata na-adịbeghị anya na nsụgharị nke ngwa nbipute. Na ụzọ nke obodo Emeela wiki nwere ọtụtụ akwụkwọ nke anyị nwere ike ịkwado onwe anyị iji ghọtakwuo ọrụ nke akụrụngwa ahụ, meziwanye ma dozie obi abụọ anyị.
Njikọta, ọrụ kwụ ọtọ na sistemụ arụmọrụ na-akwado
Transmissionnyefe ihe oyiyi nke oyi akwa ọ bụla site na ngwaọrụ ndị ọzọ site na HDMI. A na-achịkwa njikwa nke onye nbipute (moto na ọkụ) site na a Ọdụ ụgbọ mmiri USB. Na ngwa nbipute ike ịrụ ọrụ na a standalone mode na ya nwere njikọ mgbe niile na kọmpụta nke na-enyefe ha usoro obibi akwụkwọ.
Onye nrụpụta na-atụ aro iji sọftụwia Okike maka windo Iji belata ma chịkwaa usoro obibi akwụkwọ, nke a bụ sọftụwia anyị jirila nsonaazụ dị mma. Otú ọ dị obodo Onye kere ọzọ ọ bụ n'ihu nke emeputa na anyị na-atụ aro iji ojiji nke ihe onyonyo nanodlp iji nye ngwa nbipute ikike kwadoro. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ya na websaịtị onye nrụpụta https://www.nanodlp.com
Otu a A naghị ekesa ya na Spain anyị nwere ike ịzụta ya na AliExpress na ọnụahịa nke € 360 + ụgwọ mbupu. Ọnụ ego na-atọ ọchị ma e jiri ya tụnyere ịdị mma nke akụkụ ndị e biri ebi na ụgwọ nke akụrụngwa yiri ya.
Resin bụ ihe na-eri oke ọnụ karịa FDM filament nkezi ọnụahịa nke 1 lita resin odika 100 €. Agbanyeghị, iburu n'uche ụdị mbipụta nke ụdị akụrụngwa a (obere ihe nwere nkọwa zuru oke na mgbagwoju anya), otu ịzụta na-eme ka ọtụtụ ndị hụ.
La Wanhao Duplicator 3 7D ngwa nbipute bụ ihe pụrụ iche otu nke meghere anya anyị nye ụwa ọhụrụ n'ime mbipụta 3D. Anyị ga-emeli ya bipụta ihe n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs na a ahụkebe mma na ala mkpọtụ.
Anyị enweghị ahụmịhe na akụrụngwa na-eji teknụzụ mbipụta akwụkwọ a mana enyere ya nnukwu ọnụahịa dị iche iche nke otu a na ndị ya na ya na-azọ O doro anya na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ga-abụ nhọrọ doro anya. Ojiji nke akụrụngwa a ga - ewetara gị ọysụ, ọ bụrụhaala na ị bụ ezigbo ndị na - emezi nsogbu nwere ike ibilitere onwe gị.
You nwere mmasị karịsịa na otu a ma ọ bụ ndị ọzọ si Wanhao? Youchọrọ ka anyị mee nkuzi nke nwere usoro ziri ezi maka iji ya? Ga-achọ ịhụ nyocha nke ụdị resins dị iche iche anyị nwere ike iji onye nbipute a? Hapụ anyị echiche na edemede ahụ ma anyị ga-amụ ụzọ dị iche iche iji mezue ihe ọmụma nke akụrụngwa a na onye nrụpụta a.
WANHAO onye oyuyo 7
Mbipụta zuru ezu ma dị mgbagwoju anya
Nkwado pụrụ iche sitere na obodo onye rụrụ ya
Obere imewe dabara na ebe ọ bụla
O nweghi oru oru ma obu nkesa na Spain
Akwụkwọ mbụ bụ ihe na-agbagwoju anya
Emeputa anaghị ere akụkụ ahụ mapụtara
Ọ bụghị Open Source
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Wanhao Duplicator 3 7D Printer Review
O teela m nọ na-ele anya ebe obibi akwụkwọ, ego ole ka o furu gị iji gabiga kọstọm? n'ihi na ọ bụ ihe na-eme ka m laghachi ...
Tony nke Mkpụrụ osisi dijo
Ọfọn, ọ dabere n'otú ikpo okwu ị zụrụ ya si eziga ya. Ọ bụrụ na ikwuputaghị ma mee mbubata akara dị ka onyinye ma ọ bụ kwupụta obere ego, ịnwere ike ịnweta ya n'efu. Ọ bụrụ na ekwupụta ngwugwu ahụ ma ọ bụ kọmịị kọstọm ị ga-akwụ ụgwọ na igbu oge.
Agencylọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ isi na-akọwa nkọwa ya na weebụsaịtị webụsaịtị maka ngụkọta oge:
Zaghachi Toni de Frutos
Daalụ nke ukwuu maka nyocha ahụ.
Enwere m ajụjụ ụfọdụ:
Ndi silicone na-esi isi nke ukwuu? Ọ na-esi ísì ọma mgbe ọ na-ebi akwụkwọ?
You na-ekwu maka njupụta oyi akwa mana gịnị bụ mkpebi x / y?
Echekwala silicone karịrị akọrọ ma ị nwere ike iji ya ọzọ?
Inwe okpu ojii, ọ na-agwa gị ma ọ bụ kedu ka ị si mara ole silicone ị ga-eji?
Kedu usoro ị ga - eme mgbe ibipụta otu akụkụ? (Agụwo m na ọ bụ obere mmanya na-ehicha ya, ọ bụ ya)
The resin na-esi isi ntakịrị, karịsịa mgbe mbụ ị na-emeghe kalama. Mgbe ị na-ebi akwụkwọ ya nwere ike igosi ntakịrị. Ma, ọ bụghị wetara.
Mkpebi xy metụtara obere oge ị nwere ike ịbịaru na oyi akwa (voxel) ma metụta mkpebi ihuenyo. Mkpebi dị elu nke ihuenyo LCD nwere, obere ntụpọ ọ nwere ike ịdọrọ.
Enwere ike ịhapụ resin ahụ na ngwa nbipute n'onwe ya ma ọ bụ wepu tray ma wụsa ya n'ime karama mbụ ma ọ bụ ọzọ (nke bụ opaque).
Anya resin bụ site n ’anya. Ọ dịkarịrị obere resin ka eji na mbipụta ọ bụla. jupụta tray ahụ na-eme ka ọtụtụ echiche na-enweghị nsogbu.
The mmanya na-eji hichaa ngafe resin ka mmiri mmiri na-arapara n'ahụ ibe. Na mgbakwunye, a na-atụ aro ịhapụ ya nkeji 10 tupu anyanwụ ma ọ bụ isi iyi nke ọkụ UV. Nke ahụ bụ, ị na-etinye mpempe akwụkwọ n'ime iko mmanya na-aba n'anya ma kpalite ya ka ọ dị ọcha. Mgbe ahụ ị ga-ahapụ ite ahụ n'anyanwụ maka nkeji 10 ka ibe ahụ wee sie ike karị.
I meela nke ukwuu maka azịza gị ma dịkwa ọsọ ọsọ, enwere m ntakịrị nzuzu na-achọ ihe ọmụma na ịntanetị ọbụlagodi na nzukọ Bekee mana ụfọdụ ihe edoghị m anya.
Ka anyị hụ ma m zụrụ onye nbipute a na onyinye m hụrụ.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka edemede a. Ọ bụ hoo haa na-akpali. Anọ m na-ele anya na ngwa nbipute a ụbọchị ole na ole na ịnakọta ozi maka nzụta ya. M na-agba gị ume ka ị mee nkuzi ndị ae kwuru n'elu, otu ị ga-esi nweta arụmọrụ kacha mma / ngwanrọ na resins kachasị mma. Ha ga-aba uru maka obodo m chere na ọ ga-eto.
Zaghachi ka Quim
!! Daalụ nke ukwuu maka okwu gị !!
Anyị ga-elebara anya na enwere ike ịmekwu ihe gbasara otu a. !! Nọrọ na-ege ntị na blog !!
Ndewo, ị nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na resins nwere ike?
Ndewo, ekele na nnukwu ọrụ, naanị jụọ gị nnukwu ihu ọma, ị nwere ike ịkwado onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi ma ọ dịkarịa ala otu amaara, daalụ.
Ndewo ụtụtụ ọma, m na-agwa onwe m banyere onye nbipute a nke nyocha niile m na-ahụ na ọ dị ọnụ ala ma o yiri ka ọ bụ ezigbo nhọrọ, ana m achọ ya maka ọrụ ọla ka m wee chọọ ọkwa nkenke na nkọwa nke na-anabata nke ọma. nwere ụfọdụ ajụjụ esi amata nkezi nke mgbaaka ole m ga - enweta na litin resin? ị nwere sọftụwia na Spanish?
Zaghachi Milton Farfán
Kedu ka ị mere! Enwere m obi abụọ. Ọ bụrụ n ’oge ọbụla m chọrọ igbanwe kọmputa wee wepụ m mmemme ahụ, ọ ga - ahapụ m ka m jiri okwuntughe ngwanrọ na kọmputa ọhụrụ ahụ?